Archive du 20190521
Fiainam-pirenena Manome ohatra ratsy ny filoha
Nidina ifotony tamina toerana maromaro teto an-drenivohitra i Andry Rajoelina omaly. Niaraka tamina delegasionina maromaro, toy ny minisitry ny fanajariana ny tany Hajo Andrianainarivelo.
Ramboasalama TIMK25 “Hanarina sy hanorina isika”
Nifamotoana tamin’ny vahoaka marobe teo amin’ny kianja Madera- Namontana ny kandidà Ramboasalama Emilien N°4 atolotry ny TIMK25 ao amin’ny boriboritany faha-4 ny faran’ny herinandro teo.
Pasitera Rakotondrainy « Malagasy vaovao mira olomboafidy vaovao. »
Mba hahazoana malagasy vaovao dia tokony hiova ho vaovao ny olomboafidy, hoy ny pasitera misotro ronono, Rakotondrainy.
Hery Rajaonarimampianina Tavela irery…
Tsy ankitsitsy mihitsy hatramin’izay nijoroan’ity fitondrana vaovao ity ny fanenjehana ireo lazaina ho tsimatimanota.
Thb Champions League Malagasy Naroso ny fanatanterahana ny andro faha-5
Noho ilay taratasy laharana 036-19/MJS/SG/DGS avy amin’ny Tale Jeneralin’ny Spaoro Malagasy,
Foara Kanton’i Gasikara andiany voalohany Hanomboka rahampitso etsy Antaninarenina
Hanandratana ny vita Malagasy dia hotanterahina etsy amin’ny zaridainan’Antaninarenina mandritra ny 5 andro (21-25 mey 2019) ny varotra fampirantiana Kanton’i Gasikara andiany voalohany karakarain’ny Chez’Elles Madagascar tarihan’ny filohany, Ratrimoson Mihanta Stéphanie,
Edito Na fofony aza !
Ny ahiana dia ny fisantarana 58 taom-pietrena indray ao anatin’izao fitondrana izao raha ny fizotry ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny no jerena.
Ankoatra ny fahazoana ireo fitaovana informatika avy amin’ny firenena japoney dia nandray vola mitentina 500.000 euros avy amin’ny firenena alemanina koa omaly ny avy eo anivon’ny CENI.
Fahasalamana ara-pananahana Sakana ny fomban-drazana
Ankoatra ny firaisana ara-nofo mialoha loatra ataon’ny tanora Malagasy dia miteraka sakana tsy hisian’ny fahasalamana ara-pananahana ny resaka fady sy ny fomban-drazana Eto Madagasikara.
Boriborintany voalohany Nodiovina ireo lakandrano madinika
Hamafisina sy tohizina hatrany ny fanadiovana ireo lakandrano madinika eny anivon’ireo faritra iva eto an-drenivohitra.
Magazay Sinoa eny Behoririka Roahana avy hatrany izay vehivavy bevohoka
Tsy voasoratra ara-dalàna ao amin’ny CNaPS sy amina ivontoeram-piahiana ara-pahasalamana tahaka ny OSTIE araka ny tondron’ny lalàna ny zavatra hitan’ireo teknisianina avy amin’ny minisiteran’ny asa sy ny asam-panjakana niaraka tamin’ny solontenan’ny CNaPS teny Behoririka omaly.
Tantsaha ao Manjakandriana Mitaraina amin’ny fahateren’ny tany
Tery ny tany kanefa ny mponina mitombo, hoy ny mponina iray avy ao Manjakandriana, raha nitantara ny zava-misy iainan’izy ireo any an-toerana ankehitriny.
Imbiky Herilaza “Mafy ny nandrafetana ny LFR 2019”
Nodinihana nandritra ny fotoana lava ny tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana hifehy ny fandaniambolam-panjakana amin’ity taona 2019 ity (LFR 2019).